Halyeey Chelsea ah oo si cad u sheegay in Kepa uu waayi doono booskiisa haddii ay kooxda la soo saxiixato… – Gool FM
Halyeey Chelsea ah oo si cad u sheegay in Kepa uu waayi doono booskiisa haddii ay kooxda la soo saxiixato…
Dajiye September 14, 2020
(London) 14 Sebt 2020. Goolhaayahii hore kooxda Chelsea ee Mark Schwarzer ayaa sheegay in Edouard Mendy uu noqon doono goolhaayaha koowaad ee Blues, haddii ay kooxda la soo saxiixato, maadaama uu hoos u dhacay qaab ciyaareedka Kepa Arrizabalaga xilli ciyaareedkii hore.
Chelsea ayaa la soo saxiixatay Kepa Arrizabalaga xagaagii 2018, wuxuuna kaga soo biiray kooxda reer Spain ee Athletic Bilbao qiimo dhan 80 million euros.
Laakiin ma uusan soo bandhigin waxqabadkii laga filayay isaga, taasoo keentay in maamulka kooxda Chelsea ay ka fiirsanayaan inay la soo saxiixdaan badelkiisa inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, iyadoo ay jiraan warar xaqiijinaya in Blues ay ku dhowdahay inay shaqaaleysiiso goolhaayaha naadiga Rennais ee Edouard Mendy.
Haddaba Mark Schwarzer ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Goal” ayaa wuxuu ku sheegay:
“Way cadahay inay jiraan labo su’aalood oo ku saabsan Kepa Arrizabalaga, waxaan u maleynayaa in wax qabadkiisii xilli ciyaareedkii hore ay ahaayeen kuwii ugu xumaa ee Premier League”.
“Sida cad waqti fiican kuma qaadanin halkan, waxaana u maleynayaa in qaladka uusan kaligiis aheyn, sababtoo ah safka difaaca kooxda Chelsea kuma uusan jirin heerkii ugu fiicnaa”.
“Chelsea waxay ku bixisay lacago badan isaga si ay ula soo saxiixato, mana uusan bixin heerkii laga sugayay, sababtaas darteed maamulku wuxuu aaminsan yahay inay u baahan yihiin inay la soo saxiixdaan goolhaaye cusub”.
“Haddii ay Chelsea la soo saxiixato Edouard Mendy, Lampard ayaa ku soo dari doona line-upka koowaad, sababtoo ah runtii waan layaabi lahaa hadii kooxdu ay sameyso wax arrintaas ka duwan”.
Maxaa ka cusub heshiiska ay kooxda Juventus ku dooneysay Luis Suarez??